Na-akwalite ụdị gị na Mgbakọ na laptọọpụ laptọọpụ | Martech Zone
Na-akwalite ụdị gị na Mgbakọ na laptọọpụ laptọọpụ
Tọzdee, Nọvemba 19, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Oge mbụ m chọpụtara akpụkpọ dị jụụ na laptọọpụ, ọ bụ Jason Bean si bnpositive logo na akpụkpọ ya na laptọọpụ. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè n'oké osimiri nke laptọọpụ ma na-ahụ anya site n'ofe ụlọ nzukọ ọ bụla.
Ekpebiri m ịga chepụta akpụkpọ m maka MacBookPro m wee gafee weebụsaịtị ụfọdụ tupu m achọta nke dị mfe iji ma na-emezigharị ya. Saịtị m kpebiri na m bụ Akpụkpọ anụ. The interface iji chepụta anụ bụ nnọọ mfe iji, na ị na-enye ihe nlereanya ọnụ ọgụgụ nke gị na laptọọpụ nke na ọ na-sized n'ụzọ ziri ezi na ọbụna precut gburugburu logo.
Ogo nke na-esi na anụ bụ ịrịba… ọ bụ na ọ bụ nnọọ oké na ọkọ na-eguzogide ọgwụ. M ga-esi ọtụtụ nke oké kwuru na otú mara mma ọ anya na m hụrụ n'anya na eziokwu na ọ na-akwalite m ika. Okwu ịkpachara anya: jide n'aka na ị bulite onyonyo dị elu. Akpụkpọ ahụ m dị ntakịrị pixelated, mana ọ na - arụ ọrụ nke ọma ebe ọ bụ na ọ dị ntakịrị nka. M tinyekwara aha twitter m ka ndị bekee chọta wee soro m ngwa ngwa.
O juru m anya na ahụghị m ọtụtụ ụdị dị iche iche na-enye ndị bịara nzukọ ha skins laptọọpụ. Lee ka ọ ga-esi dị mma ịbanye n'ụlọ nzukọ nke teknụzụ wee mata ngwa ngwa Google, Microsoft na ndị ọrụ ndị ọzọ! Ọ dị mfe karịa ịnwa ịgụ aha ụlọ ọrụ ha na baajị dị n’olu ha!
Tags: blog kwuruntinye akwụkwọisi na mkpadorobots.txturl
Not naghị enwe mmekọahụ, ugbu a gịnị?
Nov 20, 2009 na 3:10 AM
Daalụ maka kwuru na laptọọpụ m akpụkpọ si MyTego.com. Ekwenyere m na okwu mkpebi dị elu. Nweta ụdị mkpebi kacha dị elu nke eserese ị nwere ike inweta. Ikwesiri iguzo n’etiti igwe mmadu, ka emechara, Chris Brogan weputara m na BlogINDIANA afọ gara aga maka akpụkpọ anụ laptọọpụ m.
Nov 20, 2009 na 12:21 PM
Ingchọta ebe ọhụrụ iji kpọsaa aha gị dị ka ịnweta chiiz karịa na Pizza - ị ga-ahụ ebe ọzọ iji kpo ya. Akwa post.
Branddị Cool nke Britain
Nov 23, 2009 na 4:43 AM
Nke a bụ nnukwu echiche, Doug! Aga m enweta akpụkpọ emebere maka laptọọpụ m 🙂
Nov 23, 2009 na 6:07 AM
Daalụ Michael! Got nwere ezigbo ika (ma hụ kaadị ọhụrụ n'anya!) - Nke a bụ uche zuru oke!
Mee 14, 2012 na 1: 39 PM
M na-achọ kpọmkwem otu ihe ahaziri Laptọọpụ Skin, ma na India, dị ka skinit ga-akwụ m ezigbo ego na mbupu ma ọ bụrụ na ọ bụghị na ngwaahịa ahụ n'onwe ya, ya mere ahọrọ iji họrọ ihe na mpaghara.
Choputa achoputara wee choputa theskinmantra.com na inkfruit.com, ebe inkfruit dont emeghi ahaziri ma oli, umu nwoke theskinmantra mere ya na nwa nwoke puru iche nke gbazinyere laptọọpụ m bụ ihe ịtụnanya
Enweghi ntaneti ahaziri iche na ntanetị dị ka nke skinit, mana anyị nwere ike izipu foto a na ụmụ okorobịa ma ha mee laptọọpụ larịị. Ọ bụghị ọkaibe, mana ihe niile agbagharala mgbe m natara laptọọpụ….
cna m biputere njikọ a eserese nke m laptọọpụ, wud n'anya flaunt 🙂 🙂
Mee 14, 2012 na 4: 51 PM
Ee, ikwesiri itinye ihe oyiyi ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Disqus debara aha. Ọ ga-amasị m ịhụ ya!
Aug 22, 2012 na 10:36 PM
Otu n’ime ihe mere m ji ahụ akpụkpọ anụ Skinit n’anya bụ na, ka ọ na-ewe ahụ ike, ha agaghị enwe ihe fọdụrụ. Egwu!